Alcatel wuxuu ku tusayaa noocyadiisa casriga ah ee la laaban karo MWC | Androidsis
TCL waxay soo bandhigeysaa nooca casriga ah ee isku laabma Alcatel ee MWC19
Eder Ferreno | | Mobiles, MWC
TCL waa mid ka mid ah shirkadaha jooga MWC 2019, iyo kuwo kale oo leh noocyo cusub oo taleefannada casriga ah ee loo yaqaan Alcatel. Laakiin shirkaddu waxay nooga tagaysaa warar badan oo dheeri ah munaasabadda ka socota Barcelona. Maaddaama sidoo kale la ogaa inay ka shaqeeyaan taleefannada casriga ah, oo la bilaabi doono in la furo sannadka 2020. Nooca ugu horreeya ee isku midka ah waxaan awoodnay inaan mar hore ku ogaanno Barcelona, oo leh magaca DragonHinge.
DragonHinge waa tikniyoolajiyadda ay TCL u soo saartay taleefannada casriga ah ee isku laaban. Fariin leh astaamo qalab badan oo u oggolaan doonta horumarinta taleefannada kala duwan ee isku laaban, kuwaas oo iman doona kuwa kale ee loogu talagalay Alcatel sannadka 2020. Maxaan ka filan karnaa tikniyoolajiyadan?
Waxaan horey u haysanay awood u yeeshay in aan arko gacanta hore noocyadan cusub ee TCL ay u diyaarisay Alcatel. Marka waa macquul in sifiican loo fahmo howlgalka ay taleefanadan casriga ah ee aan ku arki doono sanad gudihiis suuqa ay yeelan doonaan. Waxa intaa dheer in waxbadan laga ogaado asalka farsamadaan. Tiknoolajiyad ay shirkaddu horey u shatiyeysay, loona soo bandhigay nidaam ka duwan noocyada kale ee ku shaqeeya Android.
1 TCL iyo Alcatel waxay ku sharraxeen taleefannada casriga ah
2 Muxuu TCL u sugayaa ilaa 2020?
TCL iyo Alcatel waxay ku sharraxeen taleefannada casriga ah
Noocaani ay shirkaddu na soo bandhigeyso wuxuu la yimid a 7,2-inch cabir AMOLED leh 2K + xallin (2.048 x 1.536 pixels). CSOT, oo ah shirkad kooxeed, ayaa mas'uul ka ahayd soo saarista guddiga. Intaa waxaa sii dheer, waa in la ogaadaa in guddigan uu ku fadhiyo 90% qeybta hore ee qalabka. Waa maxay xiisaha leh oo suurtogal ah furaha DragonHinge waa in la leexin karo sidaad rabto. Wax ka soocaya nidaamyada sida Galaxy Fold ama Huawei Mate X.
TCL waxay soo saartay DragonHinge oo ah nidaamka isku laaban ee taleefanka. Sidaan soo sheegnay, waa faseexad ogolaaneysa laabashada taleefanka dibedda, gudaha, ama iskulaabashada lafteeda, sida haddii ay ahayd taleefan casri ah. Kala duwanaansho u balan qaadaya inuu fure u yahay nidaamkan, marka lagu daro la qabsiga noocyo badan oo xaalado ah. Waxay ka kooban tahay dhowr qaybood oo yaryar, oo u oggolaanaya qallooca inuu yeesho gacan gacan si looga fogaado dhibaatooyinka ka jira aagga.
Dhabarka taleefanka waxaan ku arki karnaa saddex kamarad, oo aynaan macluumaad ka haynin hadda. Tilmaamaha aan filan karno ma jiraan wax macluumaad ah, maadaama tani ay tahay nooc. Marka 2019 oo dhan waxaan filan karnaa in TCL / Alcatel ay ka shaqeeyaan. Marka bilaha markay sii socdaan wax badan ayaan ka ogaan doonnaa iyaga. Sida moodooyinka kale ee isku laaban, waxaa loogu talagalay hawlo badan iyada oo ah ujeedada ugu weyn. Waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay yeeshaan barnaamijyo badan oo furan oo ay si fudud ula shaqeeyaan.
Tani waa wax muhiim ah, marka la isku laabo taleefannada casriga ah, qalliinka isku laabidda iyo furitaanka taleefanka ayaa ah wax la qaban doono waqtiyo aan la tirin karin. Waxyaabaha TCL ay ku xisaabtamaysay markii ay horumarinaysay tikniyoolajiyadan loo yaqaan 'DragonHinge' ee loogu talagalay casriga casriga ah Hadda, Waxay horey u leeyihiin shan taleefan oo nooc nooc ah. Ma ogin haddii dhammaantood la bilaabayo. In kasta oo tan ugu horreysa ay imaan doonto sannadka 2020, sida ay shirkaddu sheegtay. Waxaan arki karnaa inay sharad ku leeyihiin qaabab kala duwan, iyagoo muujinaya noocyo badan oo kala duwan oo ku saabsan arimahan taleefannada gacanta ee isku laabma.
Laga soo bilaabo shirkadda waxay ka arkaan kuwan shaashado isku laabma sida fursad weyn. Gaar ahaan marka laga hadlayo isbeddelada naqshadaha, oo sanadihii ugu dambeeyay noqdeen xoogaa fadhiid ah, maaddaama moodooyinka hal nooc ay aad ugu egyihiin kuwa noocyada kale ee Android. Iyada oo leh qalab noocan ah
Muxuu TCL u sugayaa ilaa 2020?
Haddii ay horey u leeyihiin nooc, dad badan ayaa la yaabi doona sababaha TCL iyo Alcatel sababaha ay u doonayaan inay sugaan illaa 2020. Si ka duwan noocyada ay ka midka yihiin Huawei ama Samsung, shirkaddu uma baahna baahi ama ujeedo inay isku dhigto mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha qaybtan ama inay isku dhigto sidii nooc caan ah. Sidaa darteed, waxay doorbidaan inay sugaan illaa 2020 illaa moodeelkan ugu horreeya la soo saarayo, wax la mid ah waxa LG ay samaynayso.
Intaa waxaa dheer, shirkadda ayaa sheegtay in waxay rabaan inay sugaan illaa teknolojiyadda laga aasaaso suuqa. Wax shaki la'aan qaadan doona in ay sidaa noqdaan. Markay bilooyinku socdaan oo moodooyinku yimaadaan, marka lagu daro barnaamijyada iyo nidaamka hawlgalka ee loo diyaariyey, waxay u sahlanaan doontaa celcelis ahaan dhagaystayaasha. Marka waxay rabaan inay sugaan sii deyntiisa. Markaa dhammaan caqabadaha qalabka iyo softiweer ee soo ifbaxa waa la xallin karaa si loo siiyo khibrad adeegsade wanaagsan.
Sida lagu sharraxay TCL, qalabkan wuxuu imaan doonaa 2020 illaa Alcatel, waxay yeelan doontaa qiimo ka hooseeya 1.000 euro. Waxaa xusid mudan in ka raqiisan yahay Galaxy Fold iyo Huawei Mate X oo dhawaan la soo bandhigay. Qiimahan aadka uga hooseeya noocyada kale ayaa ka mid ah sababaha ay u sugaan. Tan iyo bilowgii dhammaan farsamooyinka cusubi aad ayey qaali u yihiin.
In kasta oo mar uun hab-soo-saarka wax-soo-saarka la waafajin doono, marka lagu daro dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ku jira iyaga, qiimaha taleefannada isku laaban ee Android ayaa hoos u dhacaya. Marka TCL iyo Alcatel waxay markaa awoodi doonaan inay soo saaraan taleefan casri ah oo laabma oo leh qiimo hoose, taas oo aad uga sahlan qayb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala suuqa. Dhanka kale, waan ku qanacsanahay inaan aragno noocyadan, illaa moodeelkii ugu horreeyay uu ka yimaado 2020 Alcatel.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » TCL waxay soo bandhigeysaa nooca casriga ah ee isku laabma Alcatel ee MWC19
Wow waxyaabaha ay had iyo jeer wadaagaan
Ku jawaab santiago ramirez lopez
Cusbooneysiinta cusub ee Telegram waxay ku dareysaa kala soo bax otomaatig ah iyo muuqaal fiidiyowyo ah
Shirkadda 'Swatch firm' waxay cambaareyneysaa shirkadda Samsung inay soo guurisay qaybo ka mid ah saacadaha ugu caansan